TAXANAHA SIYAASADDA – SIYAASIGA SOOMAALIGA AH AMMAAN MA MUDAN YAHAY. | Explorations in History and Society
TAXANAHA SIYAASADDA – SIYAASIGA SOOMAALIGA AH AMMAAN MA MUDAN YAHAY.
Fahanka Siyaasada iyo Siyaasiga
Qeybta: 3 aad
Waxay ilatahay Siyaasiyiinta Soomaalida intooda tukatana aan Cibaado suuban uga sii barino ilaahay, kuwooda taarikiinta ahna aan ilaahay uga barinno hanuun. intii aan qoraalka soo wadnay waan qarinay magacayada matukadayaasha anagoo ceebsanayna inaan fadeexeyno ee bal iyagu ha is caybsadaan salaad la’aan ay ilaahay ugu caasinayaan, waxaan sheegnay oo kaliya tukadayaasha intaan aragnay anagoo leh adinkana salaada ha idinka reebto wax badan oo uu qaarkiin ku kaco.
SIYAASIYIINTA SOOMALIDA: WAX AKHRIN IYO WAX QORIS.
Waxaan akhriyey taariikh nololeedka Madaxda dunida, waxan ogaaday in badankood ay ka qalin jabiyeen Jaamacaado, waliba ah kuwa la xiriira Siyaasada, makra laga reebo Jon Mejar oo la ii sheegay inuusan ka qalin jabin Dugsi-Sare , lakiin ka talo wacan kuwa badan oo Jaamiciyiin ah, markii aan damcay in aan ogaado taariikhda Siyaasi-yiinteenna waxa uu ahaa midka ugu aqoonta badan askarinimo mid darajo fiican ka gaaray, sida Janeraal ama Koloneyl ( waa horudhici maqaalkii: SIYAASIGA SOOMAALIGA AH EE AAN RABNO YAA INOO HAYA??!!).
Wax akhrintu waa asaaska aqoonta qofka, waana tilmaanta sharafeed ee diyaarsanaanta shakhsiga, hogaan ahaan iyo dadnimo ahaan. Xilka uu waaridku ilmihiisa iska saaro waxaa ka mid ah inuusan dhalaanku kolka uu kobco noqon ummi, taasna waxaa loo maraa in la geeyo goobaha waxbarashada, waa dadaalka ay u badku goorta ay garaad-sadaan ay waalidiintooda uga duceeyaan.
Tirakoob qayaxan laguma samayn Siyaasiyiinta Soomaalida intooda wax qorta iyo kuwooda umiga ah, laakiin xansiyo farabadan oo lagu sameeyey, waxaa lagu ogaaday in Siyaasiyiinta soo shaac baxday burburkii dalka kadib intooda badan ineysan waxna qorin waxna akhrin. Waxaa la yaqaanaa qaar kamid ah oo warqadaha loo saxiixo, kuwooda fahmada lehna fartaa loogu fiiqaa halkii ay qalinka saari lahaayeen, iyadoo horay loo soo xafidsiiyey xuruufta uu wax ku saxiixo oo kaliya.
Siyaasiyiinta qaarkood aad ayey ugu fiican yihiin wax qorista iyo wax akhrintaba, qaarnkoodna heer aad u sareeya ayey ka gaareen aqoonta, hadey tahay Milatariga, Afkaarta Shuuciyada, (hadiiba aqoonta lagu daro) iyo luqado badan, C/Laahi Yuusuf Axmed waxa uu ka mid yahay raga aqoonta xeesha dheer u leh cilmiga Caskariga, waana aqoon ay u qirsan yihiin cadawgiisa iyo saaxiibadiisba. Waxaa isagana cilmigaas aqoon qoto dheer u lahaa Jen. Caydiid oo isaguna looga danbeeyey cilmiga Milatariga.
Xagga cilmiga luqada Siyaasiyiinta Soomaalidu qaar badan oo kamid ah ayaa yaqaana luqadda Ajnabi ah C/Qaasiim Salaad Xasan waa Luqadyahan. Waxa uu ku hadlaa luqadaha kala ah, Carabiga, Talyaaniga, Ingiriiska, iyo Ruushka, luqadahaas qaarkood waxbuu ku bartay, taasoo u sii sahleysa isticmaalka luqada. Siyaasiyiinta Soomaalida intoodii wax noqotay burburkii ka hor waa rag wax akhrin yaqaan qorina yaqaan. M.Cigaal wuxuu isagu si aad ah u yaqaanay luqada Carabiga iyo tan Ingilishka, oo kolka uu ku hadlayo aad moodeyso inuuba u dhashay.
Maxamed Qanyare Afrax, waxa uu ku hadlaa Luqada Ingilishka iyo Sawaxiliga. Sidoo kale Xuseen Caydiid isna wuxuuba ku barbaaray dalka Maraykanka oo uu waxbarasho ilaa heer Jaamacadeed ku gaaray. Jaamac Cali Jaamac isna Carabiga iyo Ingilishka wuu ku hadlaa. Xasan Abshir isna Carbiga waxbaa uga baxsan, Ingiliishkana waa ku hadlaa.
Qofkii aanan garanayn afka Ingiriisiga waa jaahil—Arrintaasi ma dhabbaa? Inteese- in la’eg ayaa lagu gumaystaa?. Wardheere…
Tiro kale oo aad u badan baa jira oo luqado qalaad ku hadla, Afsoomaaligana u dheeryahay. Su’aashuse waxay tahay Luqadi ma’aqoonbaa? Jawaabta waxaad ka akhrisaa maqaalkii uu dhawaan qoray “Wardheere” ee uu uga hadlay arintaa, dabcan aqoonta luqada waa jaranjarada cilmiga, laakiin waxay luqadi agab leedahay kolka ay la socoto aqoon kale, Siyaasiyiin-teena-se waxaa ku badan kuwa aan ku hadlan afkoodii Hooyo luqad aan ahayn, waliba iyadana aanba qori aqoon.
Waxaa jira kuwa badan oo kamid ah Siyaasiyiinta Soomaalida oo aan Afsoomaliga xitaa qori aqoon, hadii aan damco inaan magacaabo wey fara badan yihiin intooda badanna waan wada aqaanaa, magacyadooda iyo dhacdooyin ama aan goob joog u ahaa ama marag leh ayaan u hayaa, laakiin aan u ceeb asturno. Iney fulaynimo iga tahayna way u badan tahay oo aanan ku dhicin sheegistooda baqdin awgeed.
Inta aan Internet-ka ama joornaalada wax ka akhrinayey waxaan marar badan akhriyey maqaallo ay qoreen madax dunida soo martay ama kuwa hada madaxda ka ah, waxaa arintaa aad ugu badan dalka Mareykan oo aad arkeyso iney madaxdooda ay Jornaalada Caalamiga ah ku leeyihiin maqaallo muhim ah, doraad ayaan akhrinayey maqaal uu qoray W/A/Dibadda ee Maraykanka, maqaalkaas oo uu uga hadlayey arimaha Suudaan. Sidoo kale waxaa lamid ah W/Gaashin-dhigga, waxaan kaloo arkaa Maqaallo uu qoro R/Wasaaraha Biritin, tusaalayaa-shaasna waa badan yihiin.
Hada ugama fadhiyo inaan ku khasbo Siyaasiyiinta Soomaalida iney wax qoraan oo ay maqaallo usoo diraan warbaahinta Somaalida. Waan ognahay iney hadlaan oo ayba wareeriyaan BBC-da iyo Idaacadaha gudahaba, qaarkood waxay jecel yihiin in maalin walba la waraysto oo la dhagaysto, laakiin caado uma lahan iney wax qoraan oo ay qalin qaataan, sababtana waxay noqon kartaa, Soomaalida oo dhaqan ahaanba aan ahayn umad qalinka agtooda qiima ka leeyahay, oo waa umada hadalka aad u jecel. Saas awgeed waligaa ma aragtay maqaal uu qoray Siyaasi Soomaali ah.
Hadaanan ka rabin iney maqaallo qoraan, aan is weydiinno ma akhriyaan qoraalada laga qoro, ha’ahaadaan kuwa iyaga laga qoray shakhsiyan ama kuwa kalaba. Qorayaasha Soomaalida ayaan maanta sir u kashifayaa. Sirtaasi waxay tahay in Siyaasiyiinta Soomalidu badankood ineysan waxba akhrin, saas awgeed haddii aad Siyaasi Soomaaliyeed wax ka qorto si shakhsi, habaqin oo hamoodin inuu ku ogaaday ee ka soo qaad inaad wax ka qortay xiligii Daraawiishta.
Aniga waxaan moodi jiray in Siyaasiyinta Soomaalidu ay yihiin sida ku Carabta oo kale, waxaan muddo arki jiray qoraa Carbeed oo maqaal ka qora Siyaasi R/Carbeed, oo ama naftiisa u waaya ama uu xumaado xiriirkii isaga iyo Siyaasiga, wuxuuna ogaadaa inuu akhriyey qoraalkiisii colaad weynna u hayo, laakiin nasiib wanaag ama nasiib xumo key noqotaba Siyaasita Soomaalidu waxba ma akhriyaan oo joornaalada ma fiirshaan, xitaa marka iyaga la waraysto dib uma akhriyaan.
Maalin ayaan dalbaday lakulanka Siyaasi Soomaaliyeed anoo waraysi ugu socda, waxaan islahaa koley ku yeeli uu mayo marka uu arko magacaaga, isla markiiba waxaa la ii soo sheegay inuu aqbalay lakulan-keyga, wuxuuna ahaa Siyaasi aan qoraal aad u adag ka qoray, tilmaamo kululna ka bixiyey oo keeni kartay inuusan igu soo dhawayn, intii aan usii socday lakulan-kiisa waxaan islahaa malaha inuu adiga ku canaanto ayuu rabaa, laakiin goortii aan u tagay madhicin oo sidii qofaan waligii imaqal ayuu isoo dhaweey, umana ekeyn nin u adkeystay qoraalkii aan ka qoray oo iskala weyn inuu igu soo qaado, malaha waraysigii aan ka qaadayna inaan daabacay iyo inkale ma sii raadin.
Taasi waxay marag ka tahay ineysan jirin faariin ay rabaan iney gaarsiiyaan dadweynaha, manalahan waax warbaahineed oo u daba gasha arimahaas, dhacdadaas aan ka soo sheekeeyey markii ay igu dhacday, waxaan iskula hadlay tolow armeyba saan ku fiican yihiin ineysan waxba akhrin, oo haday wax akhrin lahaayeen sow mushkilad kale oo Somalida ku soo biirta manoqoteen?. Anna sow maalintaa ma sigteen?. Waxaase xaqiiqo ah hadey ahaan lahaayeen kuwa wax akhriya inuu garaadkoodu intaa ka sarayn lahaa.
Sheekhul Islaam “ IBNU TAYMIYA” ayaa isaga oo xertiisa maalin wax u akhrinaya oo ay fadhiyaan, waxaa soo agmaray xubno sarsare oo ka tirsanaa madaxdii TATAARKA iyagoo cabsan, kolkaasaa nin ardaydii kamid ah sheekhii ku yiri, aan wacdiyo nimankan oon u sheego Khamradu iney Xaaram tahay iyo iney ilaahay ka cabsadaan, Sheekhii wuxuu ugu jawaabay iska daa ha cabaan khamradooda oo sidaas ha u miyir beelaane, waayo hadey soo miyir sadaan dhibta muslimka unbey ka shaqaynayaan.
Ibnu taymiya malaha wuxuu ka fakaray ka celinta khamri cabidda iyo balo u fakarkooda marka ay soo jeedaan, iney dhib yar tahay khamro cabidooda, waxaan hadda uga danleeyahay Siyaasiyiinta Soomaalida ineysan waxba akhrin armey u fiican tahay nabadgalyada qorayaasha Soomaalida, si ay fursad ugu helaan badbaadin umadda, qoraalkaanna waxaan hubaa inuusan gaari doonin qaar badan oo kamid ah Siyaasiyiinta Soomaalida laakiin adiga akhristaha ayaan kuugu talagalay.
13. OO DOWLAD DUMIS AH. IYO 13. OO DOWLAD LA’AAN AH.
Sanadku markuu ahaa 1978kii Ayaa qaar kamid ah Saraakiishii Xoogga dalka Soomaaliyeed, ka baxsadeen Dowladii Soomaaliya, waxayna u galeen Itoobiya, rag farabadan ayaa wadadaas qaaday, qofkii ka soo carooda dowladiisa wuxuu gaashaan ka dhiganayey Itoobiya, waxaana wadan-kaas isugu tagay tiro aad u badan oo kamid ahaa hawl-wadeenadii xukunkii Soomaaliya.
Gacansiintii dowladii Mingiste awgeed ayey fariisimo ciidan ka samaysteen gudaha wadanka Itoobiya, magacyadii lagu hawlgalayey waxaa kamid ahaa. S.S.D.F., kadibna S.N.M. waxaa ku soo xigay U.S.C. iyo S.P.M. intuba waa magacyada jabhadihii xarumaha ciidan ka samaystay gudaha Itoobiya.
Intoodaas waxay ka mideys-naayeen in la rido dowladdii Siyaad Barre, laakiin majirin qorshe Siyaasadeed oo u abuurnaa, qaarkood caadifad qabiil bey ku abuurmeen, qaarna sababtii loo aasasay maba aysan aqoon raggii aasaasay. Ciidanka dagaalka loogu yeerayana waxaa loo sheegay in beesha Madaxweynaha ay dhibaato u geystay beeshiisa, saas darteed ay haboon-tahay inuu daafac tolkiis.
Dagaallo lagu hoobtay ayaa la is weydaarsaday, dhibtuna waxay cirka isku shareertay goortii ay Jabhadaasi soo gaareen gudaha Somaaliya, halkaasoo ay xadgudubyo badani ka dheceen, oo ay dowladiina dad aan waxba galabsan u geysatay dhibaato, iyadoo eryaneysa ciidamo ay ugu yeertay MAHBAR.
Laga soo bilaabo 1978kii ilaa 1991kii waxay jahadahaasi ku hawlanaayeen sidii ay u dumin lahaayeen maamulkii Siyaad Barre. Abaabulkii ay 78kii bilaabeen waxay ku guuleysteen 91kii Intaas shacabka Soomaaliyeed ayaa ku dhimanayey dagaaladii u dhaxeeyey dowlada iyo mucaaradkeeda, maadama aysan jabhadahaasi lahayn Barnaamij Siyaasadeed oo ah iney gacanta ku dhigaan hanaanka maamulka ee dalka, waxaa la oran karaa hawl-galkii ahaa iney ridaan dowladda wey ku guuleesteen, maxaa yeelay hadaf intaa ka weyn maba aysan lahayn.
“Wax dumintu aqoon uma baahna ee wax garad la’aan ayey u baahan-tahay, laakiin wax dhisiddu aqoon iyo xilkasnimo ayey rabtaa”
Sida lawada ogsoon yahay wax dumintu aqoon uma baahna ee wax garad la’aan ayey u baahan-tahay, laakiin wax dhisiddu aqoon iyo xilkasnimo ayey rabtaa. Taas waxaa marag u ah, jabhadihii mucaaraday dowladii markaa jirtay mid waliba danteeda waxay ahayd Siyaad meesha ka saar, xilkaaguna intaas haku ekaado.
HALKEY KU DANBEEYEEN MADAXDII JABHADAHA:
C/Laahi Yuusuf Axmed:
Waxaa raggaas ugu magac dheer Col C/Laahi Yuusuf Axmed, oo ah aabihii bilowgii burburka Soomaalida, waa maskaxdii hindistay wiiqinta Dowladii Soomaaliyeed ee uu taladeeda hayey Jen Maxamed Siyaad Barre. C/Laahi markaas wuxuu islahaa intaad M/S/Barre xukunka ka eridid adigu ku fariiso, laakiin nasiib xumo iyo nasiib wanaag midey u noqotaba maanta wuxu gogol la fadhiyaa qaar siyaasiyiin Soomaaliyeed sheeganaya oo wiilshiisa lada’ ah.
Dhawr jeer wuxuu ku celceliyey inuu ka shalaysan-yahay bilaabistii baladatan, wuxuu yiraahdaa, ma moodeyn inuu xaalku saan noqon doono, ee hadaan ogaan lahaa maba aanan bilaabeen, wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyaa hadeerna xal Soomaaliyed baan Diyaar u ahay.
1978kii ayey ku dhalatay inuu dowlada ka horyimaado, wuxuu dhisay jabhaddii S.S.D.F. dagaallo culculus ayuu la galay dowladii dalkiisa, isagoo hubka ka soo qaadanaya codowgii dalkiisa, kuma guuleysan inuu miro ka dhaliyo, kadib isla dowladii uu gacanta ka helayey ayaa garatay iney xabsi u taxaabto, waxaa la soo daayey 91kii. Somaliya oo uusan Siyaad Barre ka talineyn, wuxuu lugta la galay Dagaaladii Sokeeye, dagaal hubeysan ayey isaga horyimaadeen isaga iyo raggii ay shalay mucaaradka isla’ahaayeen, waa Jen Caydiid, hadana Xamar bey ku shireen C/Laahi iyo Caydiid si ay dowlad u dhisaan, laakiin iskuma aysan afgaran, iyadoo nin waliba is yiri beeshaada saan uma cuntanto.
1998kii ayuu C/Laahi xaar-xaartay 5.gobol oo ugu walqalay Puntland, Magacii uu raadintiisa bilaabay 78kiiina halkaas ayuu ka helay, waa Madaxweynaha D/G/P. Sadax sano oo doorasha ah ayaa u dhamaatay, kadibna iyadoo muruq ah ayaa hadana loogu yeeraa Madaxweyne. Misana waxa uu kala qayb galayaa shirarka dib-u-heshiisiinta Soomaalida qaar socodka bilaabay 2.ama 3. sano kahor.
C/Laahi waa nin kalya adag, waxa uu rabana yaqaan, siduu ku heli lahaana yaqaan, xaq iyo xaqdarro tey rabto ha u noqotee. Waa nin u sabraa dantiisa, dunida oo dhan hadey mucaaraddo tiisa ayuu ka wataa, noloshiisa iyo wax kastaba waxaa kala muhimsan sidee baad Madaxweyne ku noqotaa. Siyaasiyiinta Soomaalidana waa ku yar yihiin hadda nin isaga oo kala ah dabci ahaan.
JEN: MAXAMED FAARAX “CAYDIID”.
Mucaaradkii dowladii Soomaaliya hadii la soo qaado waa ninka dunida ugu magaca dheer, taasoo uu ku gaaray waagii uu Sadaamka Soomaaliya ahaa, ee uu dunida oo dhan la dagaalsanaa,
Waa madaxii U.S.C. maadama uu Jenan ahaa, wuxuu noqday hogaamiyaha ciidan ee jabhaddaas, hadafkiisii ahaa inuu rido dowlada waa u meel martay, waxaa la sheegaa inuu maanka ku hayey isaga oo Madaxweyne mar un laga dhahayo dhamaan dalka Soomaaliya, si uu taas u gaaro, waxaa ciidankiisa u suura-gashay inuu Gado ka saaro Siyaad Bare, Kismaaya uu qabsado, dhinaca kalana uu ilaa Gaal-kacayo gacanta ku dhigo, mudo yar gudahood Gedo, G/Kacayo, Kismaayo, B/Weyne waa laga soo wada ceshay, kolkii danbe waxaa isugu soo hartay K/Muqdisho, ilaa Jilib agteeda iyo ilaa Baydhabo.
Intaas isaga oo gacanta ku haya ayaa isla K/Muqdisho lagu qabsaday oo ururkiisii qaar ka falliiq-meen, dagaallo culus ayaa gudaha xamar ku qabsaday, ilaa ay tiisiiba ku gashay, maalintuu dhintay ayaan Idaacaddo badan daaray si aan bal war u helo, waxaan furay Idaacadda dalka Suuriya oo warkeedii sidan u dhigtay.
(Waxaa maanta magalada Muqdisho ku geeryooday Jen.Caydiid oo kamid ahaa dagaal-oogayasha Soomaaliya, iyadoo ay toogteen dad aan la’aqoon, Caydiid wuxuu sheeganayey inuu yahay Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuse maanta dhintay isagoo ku dhex dagaalamayey K/Muqdihso).
Jananku wuxuu geeryooday isagoo sheegta inuu yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, wuxuuna dhisay dowlad ka kooban Madaxweyne,Madaxweyne ku xigeenno iyoWasiirro, mase lahayn goloyaal Barlamaan. Wiilkiisii Xuseen Caydiid ayaa dhaxal u helay, isagana sanado yar kadib wuuba kala aftaxay dowladii, halkii uu salkeeda balaarin lahaa.
Jen Caydiid wuxuu ahaa nin qofkii jecelna soo dhawaysta, kan necebna la dirira, xabad ayuuna u qaadan jiray qofkuu ka dareemo inuusan Madaxweyne-nimadiisa meel u dhigayn.
C/Raxmaan Axmed Cali “Tuur” .
Waa siyaasi ruug caddaa ah, Alaha u naxariistee dhawaan ayuu geeryooday, dagaalkii 77kii wuxuu ahaa Safiirkii Soomaaliya u fadhiyey Itoobiya, mudo kadib Dowladiisii ayuu ka carooday wuxuu ku biiray mucaaradkii, isagoo gabaadsaday isla dowladii uu shalay maqaamka Safiireed ku joogay, isagoo leh dowladii aan shalay matalayey ayaan hada ka horjeedaa.
Madax ayuu ka noqday Jabhaddii S.N.M. haddii dowladii dhexe la riday, wuxuu mahad naq u helay in Madaxweyne looga dhigay Somaliland, waana Madaxweynihii Koowaad ee ay yeelato Somaliland, wax yar kadib jagadii waa lagala noqday, misana waxaa soo dhawayn loo siiyey M/Cigaal.
Tuur hadii laga qaaday jagadaas, Xamar ayuu iska soo xaadiriyey, wuxuuna qayb ka noqday dowladii salballaar, oo uu madaxweyne ku xigeen ka helay, haddii iyadiina wiilkii kala diray oo uu xoogaa wareeray, wuxuu si xal kale waa ah, isku qanciyey inuu Siyaasadda isaga fariisto, go’aankaas isagoo ku taagan ayey tii Alle u timid. ALAHA U NAXARIISTO.
Dadkii yaqaanay waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin qabow, oo dagan.
Axmed Cumar Jees:
Waa sargaal sare oo ka tirsanaa Ciidankii Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waxay walaalo ahaayeen M.Cumar Jees oo ka tirsanaa Golihii sare ee kacaanka. Markii uu ka goostay Dowladdii Soomaaliya, waxa uu ku biiray Jabhadihii joogay Itoobiya, kadibna ciidankii S.P.M. ayuu Ammaan-duule ka noqday, wuxuu watay Jabhaddii qabsatay Gobolada Bay iyo Bakool isagoo fulinayey heshiis ay wadagaleen Saaxiibadiis.
Waxa uu qayb firfircoon ka qaatay dagaaladii sokeeye ee dalka, magaalada Kismaayo ayuu marna gacanta ku dhigayey, marna looga adkaanayey. Maxaqiijin karo inuu hankiisu ahaa Madaxweyne noqo, waxaase muuqatay inuu islahaa bal marka hore Siyaad Barre meesha haka baxo. Kadib wuxuu wax ka dhisay dowladii fadhiidka ahayd ee Salballaar loogu magac daray.
Mar dhawayd ayaa la weydiiyey inuu islahaa maalintuu dagaalka Soomaaliya ku soo qaadayey, in xaalku uu saan ku danbeyn doono, wuxuu ku jawaabay inuusan sidan filayn, laakiin uu islahaa ugu badnaan 30.cisho kabadan dalka ma qasnaan doono.
Kadib waxaa aad u daciifay dowrkii uu ku lahaa Siyaasada Soomaaliya, hada shirka Soomaalida uga socdo Kenya, wuxuu ku guuleysan waayey in dowlada Kenya ay u aqoonsato inuu kamid noqdo madaxda Siyaasadda Soomaaliya. Haddeerna waxaa soo hinqiyey golaha samata-bixinta Soomaaliyeed. Ee Balcad lagu dhisay.
Su’aasha isweydiniita leh waxay tahay. 4.taas oday ee ay labana geeryootay, labana noo shahay, hankoodii magaareen? Hadeysan gaarinna maxay ku danbeeyeen? Haddii ay 13. ku hawlanaayeen duminta Dowladdii Soomaaliyeed oo misana ka qayb qaateen 13.kii sano ee Dowlad la’aanta, maxaa talo ah oo ay hadda hayaan? .
“Hadaf la’aantu waxay dhashaa inaad qiima dhacdo”
Hadaf la’aantu waxay dhashaa inaad qiima dhacdo, waana waxa ay hada la kulmeen, malaha inkaartii umadda ayaa ku dhacday, haba ku dhacdee, ma ogyihiin iyagu iney inkaaran yihiin? Ma umalayneysaa inuu garaad leeyahay ninkii 13. sano ku hawlanaa inuu dowladiisa dumiyo, hadana 13. oo dowlad la’aan ah kadib faylka raashinka lagalay 800. qof oo ergo ah, isagoo ka soo qayb galay shir looga hadlayo sidii Somaaliya Dowladdii loogu soo celin lahaa, xusuusnow Dowlada la soo celinayo waa tii uu isagu gacantii ku dunshay.
Kuwaas waxaa ka xun, shacbiga wali ay la tahay inuu yahay kan beeshooda matala, kaba sii daranee waxay u haystaan inuu isagu yahay badbaadi-yahoodii, waxaaba macquul ah, sababta aan dowladayada u la’nahay ineyba tahay, kuwii 13.ka sano ka shaqaynayey iney dowladii dumiyaan, oo hadana 13. kale oo Dowlad la’aan ahna masuul ka ah, misana isla iyagii baa 26.sano kadib dowlad laga sugayaa.
Anigu quustayee akhristoow talo keen, maadaama aan kuu soo koobay 26.sano oo shido ah, oo ay Soomaalidu soo martay, bal xalka ii sheeg.
Categories: Moment Media ethics . . Author: antitribalism
Source: Moment Truth Project
Fakhr al-Din mosque, circa 1882 DAGAALADII HINTIRE IYO WACDAAN KU QAADEEN ISTICMAARKII TALYAANIGA. Moment RESEARCH Consultancy!